. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: စိတ်ဒဏ်ရာ
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/14/2011 02:30:00 PM
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီရက်တွေမှာ မဒိုးကန် ကဘာ့ကြောင့်ဆိုတဲ့ပိုစ့်ကိုရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ငယ်ဘ၀တွေကို အရမ်းပြန်သတိရနေခဲ့တယ် .
အဲဒီအဖေဆုံးလို့ငိုကြွေးနေတဲ့ သမီးလေးတွေကိုလဲပြန်မြင်ယောင်နေတယ် .
ဒိုးကန်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကလေးငယ်တစ်ယောက် ဟာအဲလိုရှိနေခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် သူ့အဖေကတော့ တိုက်လေယာဉ်မှုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး. တပ်ခွဲမှုးဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပေါ့ .ရေစီးသန်တဲ့ သောင်းရင်းမြစ်ထဲ ကို ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်နဲ့မျောသွားတာ သေသလားရှင်သလားတောင်မသိရအောင်ကို အလောင်းကိုရှာမတွေ့တော့ဘူး .အဲကလေးဟာ ခု အသက် ၂၀ အရွယ်နီးပါးရှိနေပေမယ့် မြစ်ကမ်းဘေးတွေကို မကြာခန သွားသွားမျှော်နေတတ်တယ်။ဒါပေမယ့် သူ့အမေကတော့ မောင်နှမလေး ၂ ယောက်ကို နောက်အိမ်ထောင်မထူပဲ ပြိုးထောင်ပေးခဲ့ရှာတယ် ။ ပိုစ့်လေးကကောင်းလို့စီမျောသွားလိုက်တာ ရင်ထဲမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်
ကလေးရဲ့ ဘဝပေး ဝဋ်ကြွေးထင်ပါရဲ့...
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်ပြီးမှ ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့ နှမြောဖို့ ကောင်းတယ်...
အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းလာဖို့ ကို မျှော်လင့်မိပါတယ်...
အပြင်မှာ တကယ်ကိုဖြစ်တတ် တွေ့ရတတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နီးနီးစပ်စပ်ကို တူပါတယ်။
အဲဒီလို ကလေးတွေ တကယ်ကို ရှိပါတယ်။
မိဘကံမကောင်းတဲ့အပြင် ဘဝကံပါ မကောင်းရှာတဲ့ သနားစရာ ကလေးတွေပါ။။
အပြင်မှာ မြင်ရတိုင်းလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်
ဝတ္ထုထဲမှာ ဖတ်ရတိုင်းလည်း ဝမ်းနည်းမိတယ်
စိတ်မခိုင်ပါဘူး ဆိုမှ ..
အင်း.မိုးခါးရဲ့.အရေးအသားတွေက ဟိုခုန်ဒီခုန်နဲ့ စာတွေလိုက်ဖတ်ရင်း အတွေးတွေနဲ့မျောပါသွားလိုက်တာ.နောက်ဆုံးကျမှပဲ.ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ ....အဖြစ်အပျက်လေးက စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ.......မျှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းလာနိင်ပါစေ.....
October 15, 2011 8:18 PM
စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်တွေက အများကြီးဘဲနော်။ ဖတ်ရင်း စိတ်တွေတောင် နုံးခွေသွားတယ်။
ရင်ထဲ နင့်လို့ပါပဲမမ...:( သနားပါတယ် ..အဲလိုကလေးငယ်တွေရဲ့ ဘဝတွေ...စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ဆိုတော့ အပြင်ဒဏ်ရာထက် ပိုပြိး ထိခိုက်ခံစားရကြရတယ်လေ...